Ny fomba anampian'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny orinasa | Martech Zone
Ny fomba anampian'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny orinasa
Alarobia, Martsa 27, 2019 Alarobia, Martsa 27, 2019 Ankit Patel
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mamirapiratra ao amin'ny indostrian'ny rindrambaiko miaraka amin'ny fahaizany. Manararaotra ny faharanitan-tsaina artifisialy ny orinasa satria mitohy mivoatra sy mivoatra. Nandritra izay taona vitsy lasa izay, nandre tantara fahombiazana betsaka momba ny faharanitan-tsaina artifisialy isika. Avy hatrany amin'ny fahombiazan'ny asa Amazon ka hatramin'ny fihazonana ny fitaovany GE dia niavaka tokoa ny faharanitan-tsaina.
Amin'izao tontolo izao ankehitriny, tsy ny orinasa lehibe ihany fa ny indostria kely ihany koa dia mipoitra isa. Ny artifisialy artifisialy dia manana fitaovana isan-karazany izay afaka manampy ny indostria kely sy salantsalany hanatsara ny famokarana sy ny fahombiazany.
Fomba 5 ny faharanitan-tsaina artifisialy afaka manampy ny orinasao
Fanampiana avy amin'ny mpanampy amin'ny fikarohana feo - Ny mpanampy amin'ny fikarohana amin'ny feo dia afaka manampy anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ny mpanampy mpikaroka feo fanta-daza indrindra dia i Siri izay avy amin'ny solosaina sy fitaovana IOS. Misy ihany koa ireo mpanampy amin'ny fikarohana feo hafa toa ny mpanampy an'i Google sy Bixby, izay vao ho avy amin'ny fitaovana Samsung. Amin'ny alàlan'ny fampiasana faharanitan-tsaina artifisialy, ireo mpanampy amin'ny fikarohana feo dia afaka manampy amin'ny fanomezana azy ireo ny vaovao ilainy. AI dia azo ampiasaina ho fitaovana manampy amin'ny fanesorana ny enta-mavesatra amin'ny olombelona. Vahaolana malaza dia Google, Microsoft, Amazon, ary Dialogflow.
Famaritana ny mety amin'ny tsena - To mahatakatra ny fizarazaran'ny mpanjifa, ny faharanitan-tsaina artifisialy dia azo ampiasaina ho fitaovana hamaritana ny fitambaran'ny vokatra-tsena. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanoratana ny herin'ny fianarana milina hahatakatra ny fisarahana amin'ny mpanjifa. Ny orinasam-pandraharahana rehetra dia afaka mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hamakafaka sy hanangona haingam-pandeha haingana kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampiasana faharanitan-tsaina artifisialy, ny fikambanana dia afaka mamirapiratra amin'ny fanaovana doka na tanjona nentim-paharazana na an-tserasera. Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia manome ny fahitana ny fandraharahana amin'ny tanjon'ny mpanjifany. Mpamatsy iray izay mifantoka amin'ny fizarazaran'ny mpanjifa mampiasa AI dia Lexer.
Taranaka fampiroboroboana ny mpiasa - Tsy ny orinasa rehetra no hanana ny fahaizana mandray olona HR. Ny orinasa toy izany dia afaka mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hanaraha-maso ny filan'ny mpiasa sy ny fampandrosoana ilaina. Ny Intelligence artifisialy dia manangona ihany koa ny fanehoan-kevitra momba ny zava-bitan'ny mpiasa iray. Ny ahiahin'ny mpiasa tsirairay sy ny heviny dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitsikilovana voatrolombelona. Ny asan'ny mpanorina sy ny tompon'orinasa dia ny mampiditra vibe tsara any am-piasana hahafahan'izy ireo manome toky fa afaka mahatakatra ny tamberina sy ny olana ny mpikambana ao amin'ny ekipany. Ohatra iray amin'izany Vahaolana AmplifAI.
Fanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa - Mba hanatsarana ny fanohanan'ny mpanjifa sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny orinasam-pandraharahana dia afaka manampy amin'ny fanampiana ireo mpiasa ny faharanitan-tsaina. Ny hakingan-tsaina artifisialy dia azo ampiasaina amin'ny fanasoketana ny tapakila mandeha amin'ny mpanjifa, amin'ny famaliana ny fanontaniany amin'ny Internet sns fitaovana afaka manampy ny orinasa kely ihany koa handefa serivisy amin'ny fomba mahomby kokoa. Miaraka amin'ny fampiasana fitaovana AI, dia hisy ny fitomboan'ny fahafaham-po sy ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa.
Fampiasana vahaolana efa vita - Fitaovana Intelligence artifisialy afaka mandeha ho azy sy streamline olana maro sy asa isan'andro amin'ny birao amin'ny fanoloran-tena be. Ny fitaovana AI dia manatanteraka asa maro samihafa toy ny fitantanana fifandraisana amin'ny fanomezana tatitra momba ny orinasa. Ny sehatra mifototra amin'ny Artigence Intelligence dia ahafahan'ny mpanjifa mifehy ny habaka fampanofana ara-barotra. Salesforce Einstein, IBM Watson Studio, Google Cloud AI, Azure Machine Learning Studio, ary Mianara milina AWS fitaovana mitarika ny indostria.
Ireo fitaovana enti-miasa artifisialy etsy ambony dia ahafahan'ny orinasa mifaninana. Ny iray amin'ireo lahasa tena nahomby tamin'ny fampiasana AI dia ny fitantanana fifandraisana isan'andro, fanangonana analytics, fandaharam-pivoriana ary maro hafa. Miaraka amin'ny fanampian'ny faharanitan-tsaina artifisialy, ny orinasa kely sy salantsalany dia manatsara ny fahombiazany sy ny fandraisany andraikitra eo amin'ny tsenan'ny lozisialy… afaka mifaninana amin'ireo fikambanana tena lehibe.
Misy fomba samihafa hanatsarana ny fenitry ny asa aman-draharaha amin'ny alàlan'ny fampiasana saina miafina, ao anatin'izany:
Ataovy ambony ny varotrao amin'ny varotra: Ny fitaovana mifototra amin'ny faharanitan-tsaina dia afaka manampy ny orinasanao isan'andro amin'ny famolavolana ny tsena, ny mombamomba ny fivarotana ny mpanjifa, ny famahana ny olana sns. AI dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana soso-kevitra amin'ny mpanjifanao amin'ny entana fanampiny, amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo vokatra ampiasainy na nampiasainy. Azonao atao ny mitady fomba ahafahana manatsara ny vidinao sy mahatakatra ny fifaninanana ataonao. Ny fampiharana AI dia manampy amin'ny laharam-pahamehana amin'ny mpanjifanao ary miasa amin'ny fitantanana famatsiana tsara.
Tsory ny fitantanana rojom-bolo:Ny fampiharana AI dia afaka manampy ny orinasa hitantana tsara ny lisitra. Ity no fomba tsara indrindra hanatsarana ny rojom-panolorana sy hanamboarana refill. Ny rindran-damina artifisialy dia hanampy anao hamolavola ny fitantanan-draharanao sy hanatanteraka ny fizotran'ny orinasanao.
Fanatsarana ny filaminana sy ny fikojakojana ny fampiharana:AI dia afaka manampy ny orinasanao hanatsara ny fandaharam-pikojakojana azy, indrindra amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny famokarana. Ohatra, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mampiasa teknolojia haino aman-jery amin'ny fanaraha-maso ny fizahana. Ny akanjo sy ny ranomason'ny faritra mekanika amin'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fampiharana AI. Ireo rindranasa ireo dia afaka manampy anao mamorona fandaharam-potoana fikolokoloana ho fanatsarana tsara kokoa. Ity farany dia manalavitra ny fahatarana tadiavina dia ny fanateram-baovao sy ny famakafakana.
Fisorohana ny heloka bevava amin'ny cyber:Mandany fotoana be dia be ny fikambanam-barotra manandrana mamantatra ny fifanakalozana hosoka. Koa satria misy lamina hita ao amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, dia azo ampiasaina hampiasaina hamantarana ireo loza mitatao amin'ny fiarovana an-tserasera ny fitaovana. Amin'ny fampiasana fitaovana AI dia mety hisy fihenan'ny isan'ny fanairana diso azontsika satria tsy fitsipika mifototra amin'ny fampiharana izany.
Fampiasana haitao mandeha ho azy:Betsaka ny orinasa mila mitatitra vokatra betsaka. Ny orinasa toy izany dia miankina amin'ny rafi-pitsikilovana artifisialy. Ny rafitra AI dia azo ampiasaina amin'ny fitaterana satria hanampy azy ireo hampidina ny vidiny ary hanaporofo fa azo itokisana kokoa noho ireo fiara entin'ny olombelona. Ny saram-pitaterana dia azo avotana ihany koa amin'ny alàlan'ny rafi-pitsikilovana artifisialy.
Manakarama ireo kandidà tsara indrindra: Ny fitadiavana ireo kandidà tsara indrindra ary manakarama azy ireo amin'ny orinasanao, dia fotoana tena ilana andraikitra. Izany no antony mahatonga ny faharanitan-tsaina artifisialy manana ny fahaizany miatrika fankasitrahana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fampiharana AI, ny mpikarama dia afaka manao dinidinika mifototra amin'ny karazana fihetseham-po izay voafaritra teo aloha. Amin'izany dia hanampy ny orinasanao handrindra ny fizotry ny fandraisana azy io.
Manapa-kevitra amin'ny raharaham-barotra tsara:Izay data rehetra dia tsy misy ilana azy raha tsy voadinika tsara. Ho an'ny fahazoana vokatra tadiavina dia mila mianatra avy amin'ny angona misy ianao. Azonao atao ny miantehitra tanteraka amin'ny rindranasan-tsolika artifisialy hanamorana ny asanao. AI dia afaka mahita lamina ary ireo lamina ireo dia azo ampiasaina amin'ny fanatsarana ny teknolojia tambajotra sy fitehirizana ao amin'ny orinasanao.
Noho izany, ireo dia fomba hanatsarana ny fenitry ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampiharana sy fitaovam-pitsikilovana artifisialy. Amin'izany dia hanatsara ny tombom-barotra tsaratsara kokoa ny orinasanao ary hahazo toerana tsara eo amin'ny tsena.
Tags: aifahaizana artifisialy
Ankit Patel dia Manager Marketing / Project ao amin'ny XongoLab Technologies ary PeppyOcean, izay manolotra vahaolana avo lenta an-tranonkala sy vahaolana amin'ny fampandrosoana ny finday manerantany. Amin'ny maha fialamboly azy dia manoratra momba ny teknolojia vaovao sy ho avy izy, ny fampandrosoana ny finday, ny fampandrosoana ny tranonkala, ny fitaovana fandaharana ary ny endrika orinasa sy ny tranonkala.
Klear Connect: Influencer Marketing CRM ary fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra
Inona ny atao hoe automatisation robotic process?